Nagarik News - बलियो ट्याब्लेट
शुक्रबार २ माघ, २०७१
अमेरिकामा भएको सीईएस प्रदर्शनीमा चक्कुले घोचे पनि केही नहुने ट्याब्लेट प्रदर्शन गरिएको छ। लेनेभोले योगा सिरिजको ट्याब्लेट २ प्रदर्शन गरेको हो। यसलाई चक्कुले घोच्दा पनि केही हुने छैन।
यसमा एनिपेन फिचर समावेश गरिएको छ। त्यसैले यसमा जुनसुकै पेनको प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। कम्पनीले यो ट्याब्लेटमा जुनसुकै पेन, पेन्सिल वा चाबी प्रयोग गर्नसक्ने बताएको छ।
यो ८ इन्चको ट्याब्लेट हो। जुन विन्डोज ८.१ मा अधारित छ। फुल एचडी भएको यो ट्याब्लेटमा १.८६ गिगाहर्ज प्रोसेसर र २ जीबी र्यानम छ। यसमा ३२ जीबी आन्तरिक मेमोरी स्टोरेज छ। यसमा पछाडि ८ मेगापिक्सल र अगाडि १.६ मेगापिक्सल क्यामेरा रहेको छ।
बैँसमा म सोझी र डरपोक थिएँ : देविका वन्दना
मेरो किशोरावस्था साह्रै रमाइलो थियो। खूब नाच्ने, गाउने, घुम्ने गरिन्थ्यो। नाच्ने काम त तिहारका बेला झन् धेरै हुन्थ्यो। एकचोटिको तिहारमा मलाई साह्रै फसाद परेको थियो।
'मोक्षान्तः काठमान्डू फिभर', 'फोसिल' र 'कोमा : अ पोलिटिकल सेक्स'बाट सम्मोहित पाठकका लागि कुमार नगरकोटीले नयाँ किताब ल्याएका छन्, 'अक्षरगन्ज।' यसलाई उनले 'एन एन्थोलजी अफ ड्रिम्स, डायरिज् एन्ड डेथ' भनेका...
अब कहाँ पढ्ने?
विनाशकारी महाभूकम्पले देशभरिका थुप्रै विद्यालयलाई भग्नावशेषमा परिणत गरिदिएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबै त्रसित र निराश छन्। कम्पनका भयबीच अब कहाँ पढ्ने, कहिलेदेखि पढ्ने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् विद्यार्थी।...
प्रधानमन्त्रीलाई भैँचालो पीडितको पत्र
काठमाडौं- वैशाख १२ गते आएको महाभुईँचालोले खण्डहर बनेको बस्तीबाट तपाईंलाई यो पत्र लेख्दै छु। भूकम्प पीडितका तर्फबाट तपाईंसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने मसँग यो पत्रबाहेक अरू के नै विकल्प छ र?...
जाडोसँगै 'फेशन शो'को लहर
सडकमा जथाभावी कागज, लुगाका टुक्रा, चाउचाउ र चकलेटका खोल फ्याँकिएका भेटिन्छन्। तिनले वातावरणलाई त प्रदूषण गर्छन् नै, शहरलाई समेत कुरूप बनाइदिन्छन्। तर, तिनै फोहोरका रूपमा फालिएका वस्तुमा सिर्जनशील दिमाग प्रयोग...
फिट त रहनैपर्छ
नयाँ पुस्ताको जिब्रैमा झुन्डिएको शब्द हो– क्लब। क्लब भनेपछि बिहानपख हेल्थ क्लब बुझ्ने नयाँ पुस्ताले दिउँसो फुटबल क्लब त साँझमा डान्स क्लब बुझ्छ। सुगठिलो ज्यान बनाएर शारीरिक रूपमा फिट रहन...
मुन्ना बिबी एमबीबीएस र राजेश हमालको उठबस
नामः आफूलाई डा. सुहाना, अदिति, सृष्टि केसी बताउने भगवती केसीउमेरः अन्दाजी २३ वर्षठेगानाः गुल्मी, हस्तिचौर– ९ (हालः काठमाडौँ, पोखरालगायत स्थानमा बस्दै आएको)सम्पर्क नम्बरः ९८६०७०७५६५, ९८०३१९६३६२, ९८१३६८४८१४, ९८१३६८४८२०, ९८०३६४२६०६, ९८६७२८४३५५, ९८२५१६२४१८,...